Degso Skype loogu talagalay Windows
Bilaash Degso loogu talagalay Windows (74.50 MB)
Waa Maxay Skype, Ma La Bixiyaa?
Skype waa mid ka mid ah barnaamijyada fiidiyowga lagu sheekeysto ee bilaashka ah iyo farriimaha farriimaha adduunka oo dhan ay adeegsadaan kombiyuutarrada iyo kuwa casriga ah. Barnaamijka kuu ogolaanaya inaad qoraal, ku hadasho ama ku sheekaysato fiidiyoow bilaash ah adoo adeegsanaya internetka, waxaad fursad u leedahay inaad ugu wacdo guriga iyo taleefannada gacanta qiimo jaban haddii aad rabto.
La kulanka isticmaaleyaasha kombiyuutarkooda, taleefannada gacanta iyo kumbuyuutarradeeda oo ay ugu mahadcelinayaan kaabayaasheeda badan, Skype wuxuu adeegsadaa tikniyoolajiyadda P2P dadka isticmaala si ay ula xiriiraan midba midka kale. Barnaamijka, oo leh astaamo horumarsan sida maqal iyo muuqaal fiidiyoow sare ah (way kala duwanaan kartaa iyadoo kuxiran xawaarahaaga isku xirka internetka), taariikhda wada hadalka, wicitaanada shirarka, wareejinta feylka ee aaminka ah, waxay bixisaa dhamaan noocyada aaladaha ay isticmaaleyaashu u baahan karaan. In kasta oo lagu dhaleeceeyay isticmaalka taraafikada internetka oo aad u sareeya iyo nuglaanta amniga, haddana Skype shaki laaan waa mid ka mid ah farriimaha ugu wax ku oolka badan iyo codsiyada fiidiyowga lagu sheekeysto ee suuqa ku jira hadda.
Sidee loo Geliyaa / Login Skype?
Ka dib markaad soo degsato oo aad ku rakibto Skype kombiyuutarkaaga, haddii aadan laheyn akoon isticmaale marka aad barnaamijka wado markii ugu horeysay, waa inaad marka hore sameysataa koontadaada isticmaale. Dabcan, haddii aad leedahay koonto Microsoft xilligan, waxaad fursad u leedahay inaad ku gasho Skype koontadaada Microsoft. Ka dib markaad dhammaystirto habraacyada lagama maarmaanka ah, waxaad fursad u heli doontaa inaad si bilaash ah ula xiriirto dhammaan isticmaaleyaasha Skype adduunka oo dhan.
Haddii aad horey u haysatay xisaab Skype ama Microsoft, raac talaabooyinkan si aad ugu gasho Skype:
Fur Skype ka dibna riix magaca Skype, cinwaanka iimaylka ama lambarka taleefanka.
Gali magacaaga Skype, cinwaanka iimaylkaaga ama lambarka taleefankaaga ka dibna dooro Gal.
Gali lambarkaaga sirta ah oo xulo fallaarta sii wad. Kal-fadhigaaga Skype ayaa la furi doonaa. Ka dib markaad soo gasho, Skype waxay xasuusataa macluumaadkaaga gelitaanka markii aad xidho Skype ama aad doorato inaad ka baxdo oo aad xasuusato dejinta koontadaada.
Haddii aadan haysan xisaab Skype ama Microsoft ah, raac tallaabooyinkan si aad ugu gasho Skype:
Tag Skype.com biraawsarkaaga ama soo dejiso Skype adiga oo gujinaya badhanka Skype soo degsada ee kor ku xusan.
Bilow Skype oo guji Abuur koonto cusub.
Raac jidka lagu muujiyey sameynta akoonno cusub oo loogu talagalay Skype.
Sida loo Isticmaalo Skype
Caawinta Skype, halkaas oo aad ku qaban karto dhammaan howlaha sida wicitaanka codka, wicitaanada shirarka wadajirka ah ee asxaabtaada, wada sheekeysi fiidiyow oo tayo sare leh, wareejinta feylka aaminka ah, waxaad kula xiriiri kartaa asxaabtaada iyo qoyskaaga adiga oo fogeeya masaafada.
Waxaad sidoo kale diyaarin kartaa liiska asxaabtaada, abuuri kartaa kooxo fariin wadareed saaxiibbadaa ah, adeegso muuqaalka wadaagista shaashadda si aad ugu soo bandhigto ama u caawiso dad kala duwan kombuyuutarkaaga, baari waraaqahaagii hore adigoo uga mahadcelinaya muuqaalka taariikhda / sheekaysiga, wax ka beddel farriimaha aad dirtay ama aad adeegsato tibaaxyo kala duwan.Waxaad u diri kartaa saaxiibbadaada intaad farriinta direyso.
Isku xirka isticmaale ee Skype waa mid dareen leh oo si fudud loo isticmaali karo. Sidan oo kale, kombuyuutarrada iyo adeegsadayaasha moobiillada ee dhammaan heerarku waxay si fudud u isticmaali karaan Skype dhib laaan. Astaamaha sida astaanta isticmaalaha, ogeysiiska xaaladda, xiriirka / liiska saaxiibada, wada hadaladii ugu dambeeyay ee ku saabsan dhammaan barnaamijyada fariimaha caadiga ah waxay ku yaalliin dhinaca bidix ee adeegsadaha isticmaalaha Isla mar ahaantaana, faylka Skype, goobaha kooxeed, sanduuqa raadinta iyo badhamada raadinta ee lacag bixinta ayaa sidoo kale loo soo bandhigaa dadka isticmaala daaqadda weyn ee barnaamijka. Dhinaca midig ee barnaamijka barnaamijka, waxyaabaha aad dooratay ayaa lagusoo bandhigayaa iyo daaqadaha wadahadalka ee aad la sameysay dadka aad xulatay ee ku jira liiska xiriirka.
Haddii aad leedahay xiriir internet oo deg deg ah, waxaan dhihi karaa kama heli doontid tayada codka iyo wicitaanka fiidiyaha ee Skype barnaamij kasta oo fariin ah. In kasta oo ay ku siineyso cod aad u fiican oo tayo leh marka loo eego adeegyada VoIP, haddii aad leedahay xiriir internet oo gaabis ah, waxaad la kulmi kartaa dhalanrog iyo dib u dhac ku yimaada codka.
Taas ka sokow, xitaa haddii aad leedahay xiriir internet oo xun, waad ka faaiideysan kartaa muuqaalka fariinta Skype ee dhib laaan. Badhanka tayada wicitaanka ee barnaamijka ayaa ku siin doona macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan wicitaanka fiidiyowga ama wadahadalka codka ee aad sameyneyso xilligaas.
Soo dejiso oo rakib Skype
Haddii aad raadineyso farriin wax ku ool ah oo si fudud loo isticmaali karo, wicitaan cod iyo barnaamij wicitaan fiidiyoow ah, waxaan dhihi karaa kama heli doontid wax ka wanaagsan Skype suuqa. Haddii aan tixgelinno in Skype, oo ay iibsatay Microsoft sanadkii 2011, lagu sameeyay dhammaan meeraha oo lagu beddelay barnaamijkii caanka ahaa ee farriinta Microsoft ee Windows Live Messenger, ama MSN sida ay u yaqaanaan dadka isticmaala Turkiga, waxaad mar kale ogaan doontaa sida aan ugu saxsanahay waxa Waxaan ku iri.
Wicitaanka maqalka iyo muuqaalka HD: Khibrad maqal iyo muuqaal HD ah oo loogu talagalay hal-hal ama wicitaan kooxeed oo leh jawaabo wicitaan.
Fariin xariif ah: Ugu soo jawaab fariimaha oo dhan isla markaaba falcelin xiiso leh ama isticmaal @ calaamadda (ku xusan) si aad u hesho dareenka qof.
Wadaagista shaashadda: Si fudud ula wadaag bandhigyada, sawirrada ama wax kasta oo shaashaddaada ah oo lala wadaago shaashadda.
Wicitaanka duubista iyo cinwaanka qoraalka Tooska ah: Diiwaangeli wicitaanada Skype si aad u qabato daqiiqado gaar ah, qorto goaamada muhiimka ah, oo aad u isticmaasho qoraal toos ah si aad u aqriso waxa lagu hadlayo.
Wicitaanka taleefannada: La xiriir saaxiibbada khadka ka baxsan adigoo waca taleefannada gacanta iyo khadadka taleefannada guryaha oo leh qiimo wicitaano caalami ah oo la awoodi karo. U yeer wicitaanada taleefannada guryaha iyo taleefannada gacanta ee adduunka oo dhan qiimo aad u hooseeya adoo adeegsanaya amaahda Skype.
Wadahadalka gaarka ah: Skype wuxuu ku ilaaliyaa wada hadalkaaga xasaasiga ah mid qarsoodi ah sirta warshadaha heer-ilaa-dhamaadka.
Kulamada tooska ah ee hal-guji: Abaabula shirarka, wareysi la yeelo hal guji adiga oo aan soo dejin barnaamijka Skype iyo qorista.
U dir SMS: Si toos ah farriimaha qoraalka ah uga dir Skype. Soo ogow sida ugu dhakhsaha badan uguna fudud ee aad ugu xidhi karto SMS-ka khadka tooska ah meel kasta, wakhti kasta adoo adeegsanaya Skype.
La wadaag goobta: Raadi midba midka kale taariikhda ugu horeysa ama u sheeg asxaabtaada goobta madadaalada.
Saamaynta hore: Markaad daarto astaantan, sooyaalkaaga ayaa yara yaraada. Waxaad ku badali kartaa asalkaaga sawir hadaad rabto.
Diritaanka faylasha: Waxaad si sahal ah ula wadaagi kartaa sawirada, fiidiyowyada iyo faylasha kale ilaa 300MB cabir ahaan adoo jiidaya isla markaana ku ridaya daaqada wada hadalkaaga.
Turjubaanka Skype: Ka faaiideyso turjumaadda waqtiga-dhabta ah ee wicitaannada codka, wicitaannada fiidiyowga iyo farriimaha degdegga ah.
U dirista wicitaanka: U sii gudbi wicitaanadaada Skype taleefan kasta si aad ula xiriirto marka aadan ka tirsanayn Skype ama aadan ka jawaabi karin wicitaanada.
Aqoonsiga soo wacaha: Haddii aad ka wacdo taleefannada gacanta ama khadadka taleefanka gacanta ee Skype, lambarkaaga gacanta ama lambarka Skype ayaa la soo bandhigi doonaa. (Waxay u baahan tahay hagaajin.)
Skype To Go: Ka wac lambarada caalamiga ah taleefan kasta qiime jaban oo leh Skype To Go.
Telefoon, desktop, kiniin, web, Alexa, Xbox, hal Skype dhamaan qalabkaaga! Ku rakib Skype hadda si aad ula xiriirto kuwa aad jeceshahay ee adduunka oo idil!
Sidee loo Cusbooneysiiyaa Skype?
Cusbooneysiinta Skype waa muhiim si aad u dareento astaamaha ugu dambeeyay. Skype waxay si isdaba joog ah u sameysaa horumar si loo wanaajiyo tayada, loo wanaajiyo kalsoonida, loona hagaajiyo amniga. Sidoo kale, marka noocyada duugga ah ee Skype la joojiyo, haddii aad sii waddo adeegsiga mid ka mid ah noocyadan duugga ah, waxaa si otomaatig ah lagaa saari karaa Skype oo ma awoodi doontid inaad gasho mar kale illaa aad ka cusbooneysid nooca ugu dambeeya. Markaad cusbooneysiiso barnaamijka Skype, waxaad marin ka heli kartaa taariikhdaada sheekaysiga illaa sannad ka hor. Waxaa laga yaabaa inaadan awoodin inaad ka soo gasho taariikhdaada sheekaysiga taariikhda hore ka dib cusbooneysiinta ka dib. Nooca ugu dambeeya ee Skype waa bilaash si loo soo dejiyo oo loo rakibo!
Dhagsii badhanka Skype soo dejinta ee kor ku yaal si aad u soo dejiso nooca ugu dambeeya ee Skype oo u soo gal. Haddii aad isticmaaleyso Skype Windows 10, waxaad ka hubin kartaa wixii cusbooneysiin ah ee ka socda Dukaanka Microsoft. Si aad u cusbooneysiiso barnaamijka Skype ee Windows 7 iyo 8, raac talaabooyinkan:
Xulo Hubi cusboonaysiinta. Haddii aadan ku arkin menu-ka Caawinta ee Skype, taabo ALT si aad u muujiso bar-tilmaameedka.
Muuqaalka shirarka fiidiyowga ee tayada leh HD
Fursad aad kula hadasho adduunka oo dhan qiimo jaban
Muuqaalka wadaagista shaashadda
Cabirka Faylka: 74.50 MB
Horumar: Skype Limited